Ukukhulelwa kweMpawu ngeveki, Ukukhulelwa kwe-Calculator, IiVideos
Iiveki ze-2 ezikhulelwe
Iiveki ze-8 ezikhulelwe
Iiveki ze-12 ezikhulelwe
Iiveki ze-16 ezikhulelwe
Ukukhulelwa Q kunye no-A
Iveki yeMpawu yokuZithwa ngeVeki
Ukukhulelwa kwe-pregnancy Calculator and pregnancy Videos
Wamkelekile kwihlabathi lezisu ezikhulelwe! Sitsho ngokumomotheka kuba yinto enye yezinto ezininzi ozakuzisebenzisa xa usukhulelwe ngeveki. Ukukhulelwa kunokuba yinto evuyayo kunobomi bomfazi, kodwa izaliswe nemibuzo kunye nexhala. Njengoko ukukhulelwa kukhula, awukwazi ukuba ungalindela nganye iveki kwaye ube nolwazi malunga nokukhulelwa kwempawu ngeveki ngeveki. Sinokukunceda.
Kuba abo bacamngca malunga nomhla ofanelekile, sinikela Ukukhulelwa kweeveki yeeveki ngexesha elifanelekileyo, enceda kakhulu. Sinika nokufundisa malunga nendlela yokubala umhla ofunekayo. Hlola ngokuphindaphindiweyo ukuze uhlale unolwazi malunga nokukhulelwa kwakho ngeveki. Ukutyelela i-Q kunye neCandelo ukubuza umbuzo uze ufunde iimpendulo. Sigcine kwi-loop yakho ngexesha lakho lokukhulelwa ngeveki. Ngaba ufumana imiqondiso eqhelekileyo, engavamile? Nasiphi na isizathu sokukhathazeka malunga nokukhulelwa kwakho okutsha? Asinabo uDkt kodwa ulwazi lwethu lunokunceda. Sinokukunceda ukuba uqaphele ukuba ukukhulelwa kwakho iimpawu ngeveki ngeveki ziqhelekileyo ngexesha lakho lokukhulelwa. Kwakhona, kungcono xa uyazi ukuba ulindele ntoni ngeveki. Sinika iiveki ngeveki ulwazi, ukuqala ukukhulelwa iimpawu zeveki ze1. Yintoni ukukhulelwa kwempawu ngeveki ye2, ngeveki 5, njl. Kukho iveki ngeveki yokukhulelwa i-calculator, kunye nekhalenda ukubeka iliso lomzimba wakho kunye nosana lwakho ngale
Ukukhulelwa kweVidiyo zeVidiyo
Iveki 1 -Iveki 2 -Iveki 3 – Iveki 4 -Iveki 5 – Iveki 6 – Iveki 7-Iveki 8 -Iveki 9 – Iveki 10 – Iveki 11 -Iveki 12 – Iveki 13 – Iveki 14 – Iveki 15 -Iveki 16 – Iveki 17 – Iveki 18 -Iveki 19 -Iveki 20 – Iveki 21 – Iveki 22 -Iveki 23 – Iveki 24 – Iveki 25 Iveki 26 -Iveki 27 – Iveki 28 – Iveki 29 – Iveki 30 – Iveki 31 -Iveki 32 – Iveki 33 – Iveki 34 – Iveki 35 -Iveki 36 – Iveki 37 - Iveki 38 – Iveki 39 – Iveki 40
Lapho sikwazi khona, sinikezela ngokufanelekileyo iividiyo zokukhulelwa njengokuba. Sijolise ngokukodwa kwiinkcukacha ezinxulumene nempilo kunye nokubonelela ngeengcebiso zokukhulelwa kunye neengcebiso ngexesha lokukhulelwa kweveki ngeveki, njengokuba ividiyo iqhagamshela ngaphezulu. Baziswa kuwe I-Digest Health Digest. Siyakwandisa nangona kunjalo, kwaye ividyo iqhubeka phantsi kwekhasi elingezantsi ichaza ukuthenga umntwana. Siza kwandisa izithuba rhoqo malunga nokuthenga umntwana, isistim yokubhalisa isipho, nokuba nemibono yokuhlamba umntwana.
Kodwa ngaba enye i-website iyadingeka ukuze ufumane ulwazi oluthe xaxa malunga nokukhulelwa? Sicinga njalo! Ngenye, i-calculator yeveki yokukhulelwa iya kunceda ukubala umhla ofunekayo. Mhlawumbi unemibuzo yokuqala kule ngongoma: Yithini ukukhulelwa kwempawu ngeveki? Ziziphi ezinye ezincinane kakhulu imiqondiso yokukhulelwa? Ndingazi njani ukuba ndikhulelwe, okanye iimvavanyo zokukhulelwa zichanekile, okanye indlela yokukhetha kunye nomthinteli. Mhlawumbi unemibuzo kwi-STD kwaye ukhulelwe okanye usebenzise xa ukhulelwe. Ziziphi ii-trimesters ezihlukeneyo, kunye neempawu zokukhulelwa ngeveki ngexesha ngalinye. Mhlawumbi uzibuza malunga nokunceliswa kwebele, umfomfom we-baby, njl. Ngomlinganiselo wokubala weveki kunye nokunye ulwazi kwiziko lethu, Ukukhulelwa ngeveki, sijonge ukuphendula le mibuzo kunye nezinye ezininzi! Sifaka ukukhulelwa kwakho kwixesha elifanelekileyo, ixesha elisezantsi, ngexesha lokukhulelwa kweveki ngeveki, i-trimester ukuya kwi-trimester. Sinokukufihla phambili ngolwazi kunye neengcebiso ngaphambi kokukhulelwa, izinto zokuqwalasela ngaphambi kokuba ukhulelwe. Siya kwelinye inyathelo, sixoxa ngokuhambisa nokuvelisa umntwana ophilileyo kweli hlabathi lanamhlanje. Ngentuthuko eqhubekayo, i-calculator yeveki yokukhulelwa ngexesha elifanelekileyo liya kunika ulwazi oluchanileyo. Uyakwazi ukukhangela ngosuku lwakho lokugqibela kunye nosuku lwakho lokuzala. Kuza kuba neendlela eziphambili zokubala ukukhulelwa kwakho ngeveki.
Njengoko sitshilo siza kufaka izithuba rhoqo malunga nokuthenga umntwana, isibonelelo sesipho, kunye neengcamango zokuhlamba umntwana. Hla umamele! Akukho nto ithelekiswa nommangaliso kunye nomlingo wokukhulelwa. yithuba lakho lokubandakanyeka kwinkqubo enkulu yokudala yobomi. Ukucwangcisa phambili kweli lizwe kunokuphucula amathuba akho okukwenza kakuhle wena kunye nosana. Inokukunceda ukuchonga okanye ukunciphisa impawu zokukhulelwa. Ukuphila kwakho kukuchaphazela impilo yakho yintsana, kodwa kunokuchaphazela nokukhulelwa kwempawu ngeveki. Ngokucwangcisa phambili ngeveki yakho yokukhulelwa ngeveki, uqinisekisa ukuba umntwana wakho uye wazibonela kwizinto ezilungileyo kwaye ugweme izinto eziyingozi ngexesha lokukhulelwa. Ngethuba labaninzi abafazi bayazi ukuba bakhulelwe baye enye kwiinyanga ezimbini ukukhulelwa kwabo. Ngethuba libona ugqirha, ziinyanga ezimbini okanye ezintathu zihamba. Kungenxa yoko iimpawu zokukhulelwa kokuhamba ngeveki ziphambili. Iiveki zokuqala ze-12 zokukhulelwa zibaluleke kakhulu kuba yilapho umntwana esenza iinkqubo zayo ezinkulu. Izinto ezininzi ezibalulekileyo zenzeka ngaphambi kokuba uqaphele ukhulelwe okanye ubone ugqirha wakho. Ukuba nesimo sokukhulelwa kuthetha ukulungiswa ngokomzimba nangokwengqondo. Uyakufumana utshintsho olukhulu ngexesha lokukhulelwa kwakho. Ukuba nempilo ebanzi ngokubanzi ngaphambi kokukhulelwa kunokukunceda ukujamelana nokukhathazeka ngokomzimba nangokomzwelo wokukhulelwa, abasebenzi kunye nokuhanjiswa. Kuya kukunceda ulungiselele ukunyamekela umntwana osandulayo. Sikunceda ukuba uqaphele ukukhulelwa kwakho ngeveki. Ngokukhulelwa kweeveki yokukhulelwa kunye neenkcukacha zeblogi ezinxulumene nayo, uya kulungelelwa ngokupheleleyo.
Khangela indawo yethu kwiilwimi ezahlukeneyo, usebenzisa ukuhamba kwinqanaba eliphezulu. Kwakhona, nceda ukhululeke ukubeka izimvo ngeveki yakho yokukhulelwa ngeveki, iimpawu, amava, njl. Buyela kungekudala!
iindidi Khetha Udidi Iiveki ze-12 ezikhulelwe Iiveki ze-16 Iimpawu ezikhulelweyo Iiveki ze-18 ezikhulelwe Iiveki ze-2 Iimpawu ezikhulelweyo Iiveki ze-8 Iimpawu ezikhulelweyo Ukuqhawula ukukhulelwa Iimpawu zokuqala zokukhulelwa Ukukhulelwa komzimba Ukukhulelwa komzimba Ukugula kweMasa Ukukhulelwa Ukukhulelwa kokukhulelwa Imizimba yokukhulelwa Ukukhulelwa kweveki iiVeki ngeveki Ukukhulelwa kweTubal
Asikho oogqirha kunye nolwazi kule webhsayithi aluyiyo ingcebiso yonyango. Senza imizamo yethu yokubonelela ngolwazi oluchanileyo kodwa asiqinisekanga. Siyanikhuthaza ukuba ufune iingcebiso zonyango eziqilileyo ezivela kwiDokotela okanye kwi-OBGYN.
Ndiyabulela ngokukhangela ibhulozo Ukukhulelwa ngeveki. Umxholo wesiza ukukhulelwa ngeveki ngeveki. Sinikeza ukukhulelwa iimpawu ngeveki, kunye nolwazi oludibeneyo, ukuqala ngokukhulelwa kwangaphambili ngexesha lokunikezelwa.
Ukukhulelwa kweVeki yeVeki ye40
Ukukhulelwa kweVeki yeVeki ye39
Ukukhulelwa kweVeki yeVeki ye38
Ukukhulelwa kweVeki yeVeki ye37
Ukukhulelwa kweVeki yeVeki ye36
Copyright © Wonke amalungelo agcinwe. Ukuziphendulela: Asikho oogqirha kunye nolwazi kweli bhsayithi akuyiyo ingcebiso yonyango. Senza imizamo yethu yokubonelela ngolwazi oluchanileyo kodwa asiqinisekanga. Siyanikhuthaza ukuba ufune iingcebiso zonyango eziqilileyo ezivela kwiDokotela okanye kwi-OBGYN.